Awusebenzisi Inzuzo Yemakethe Yomhlaba Wonke
Muva nje, ngivakashele umthengisi wendawo. Unebhizinisi eliyisimanga nendawo lapho angakwazi khona ukuklama, ukulungisa nokuthengisa okuthengiswayo konke kusuka endaweni yakhe kusuka ekuqaleni. Izikhungo zakhe zingenye zezwe ezihamba phambili ezweni, futhi wonke umuntu osebenza naye unamakhono ahlukile, oqeqeshiwe futhi oqinisekisiwe. Inselelo yakhe ukuthi ukumaketha kwakhe kwendabuko akuhehi isiminyaminya sezimoto obejwayele ukukwenza. Ukuba khona kwakhe ku-inthanethi ikakhulukazi kuyincwajana. Siya